Sheekh Maxamed Naasiruddiin Al-Albaani - Wikipedia
Dhashay 1332H = 1914M Ashqoodara Albaaniya, Dhintay 22.6.1420H = 2.10.1999M Cammaan Urdun, Mad-habkiisa Ahlu-xaddiis, Caqiidadiisa Salafiya.]] Taariikh nololeedkii Sheekhul-Islaam Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani
1 Imaam Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani
1.2 Barashaddiisii Xaddiiska
2.1 Amaantii ay culimada amaaneen
2.2 Dardaarankii sheekh Albaani
Imaam Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Wuxuu ahaa Muxaddis, Faqiih dadka ugu yeera Kitaabka iyo Sunnada Nebiga c.s.w. iyo in loo fahmo sidii ay u fahmeen Salafkii suubbanaa iyo qoraa xeeldheer, wuxuuna ka mid ahaa culimada ugu waaweyn ee muslimiinta ee waqtigan aan joogno.
Wuxuu dhashay Sheekhul-Islaam aw CabdiRaxmaan Maxamed Naasirud-Diin ina Xaaji Nuux ina Aadan Najaati al-Albaani ad-Dimishiqi al-Urduni sanadka Hijrigu markuu ahaa 1332H. oo ku beegnayd sanadka Miilaadiga markey aheyd 1914M. Wuxuuna ku dhashay Ashqoodara oo ahayd magaalo-madaxdii Albaaniya xiligaasi. Reerka sheekhuna waxay ahaayeen qoys diinta ku dhaqma oo aabihiisna wuxuu ahaa sheekh dadka diinta bara. Sheekh Albaani wuxuu la soo qaxay reerkiisii oo la soo degey Dimishiq Suuriya, ka dib markii Axmed Saago ”boqorkii Albaaniya” ee xiligaasi uu qaatey ilbaxnimadii reer galbeedka ee ku dhisnayd in laga fogaado diinta ”Calmaaniyadda”.
Sheekhu wuxuu ku dhameystay waxbarashadiisii dugsiga hoose ee al-Iscaaf al-Khayri oo ku yaaley Dimishiq Suuriya.
Sheekh Albaani wuxuu sidoo kale aabihiis ka bartay mihnada sida loo hagaajiyo saacadaha oo ahayd xirfaddii uu ku shaqaysan jiray, mihnaddaana waxay u sahashay inuu helo waqti ku filan uu wax ku akhrisan karo, sidoo kale u soo hijroogii reerkiisa u soo hijroodeen Suuriya waxay u sahashay inuu barto afka carabiga uuna ka akhristo culuumta shareecada kutubta maraajicda ah.
Barashaddiisii Xaddiiska[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sheekh Albaani wuxuu bilaabay barashada Xaddiiska markuu jirey labaatan sano. Kitaabkii ugu horeeyay ee uu ka barto cilmiga Xaddiiska wuxuu ahaa: "al-Mugni" ee uu qorey Sheekh al-Ciraaqi Eebbe ha u naxariistee.
Wuxuuna qoray kutubo fara badan oo boqol ka badan una badan cilmiga Xaddiiska iyo fiqhiga Xaddiiska.
Ardaydiisa[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Ardaydiisii Waxaa ka mid ah Suuriya Dimishiq:
Iyo kuwo kale oo fara badan oo ka faaiday kutubtiisii oo kala jooga Adduunka dacaladiisa.
Culumadii saameynta weyn ku lahaa waxaa ka mid ahaa sheekhul-Islaam Ibnu Taymiya iyo ardeygiisii Ibnu Qayyim Eebbe ha u naxariistee.
Sheekh Albaani wuxuu booqasho ugu tagay waddamo kala duwan wacdin iyo muxaadaro ujeedin sida: Sacuudi carabiya, Qadar, Kuweyt, Masar, Isutagga Imaaraadka carabta, Isbeyn, Ingiriiska iyo Jarmalka.
Amaantii ay culimada amaaneen[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Ma jiro waqtigan aan joogno qof ka yaqaan sheekh Albaani nolosha nabiga ”cilmiga xadiiska” (NNKH).
Wuxuuna yiri Sheekh Rabiic al-Madkhali -Eebbe ha dhowree- :
Aniga waxay ila tahay xagga akhriska kutubta sheekh Albaani inuu kaga dheereeyo Ibnu Taymiya iyo Ibnu Xajarba.
Dardaarankii sheekh Albaani[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxay go'aamisay guddiga bixiya abaalmarinta caalamiga boqor Faysal ee diraasaadka Islaamka in la siiyo abaalmarinta sanadka 1419H = 1999M mowduuceeduna yahay "dadaaladii cilmiga ee lagu bixiyay Xaddiiska Nebiga c.s.w. hadday ahaan lahayd tifaftirid, soosaarid iyo baaritaanba" Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani ee jinsiyada Suuriya haysta, iyadoo lagu sharfayo dadaaladiisii faraha badnaa ee uu ku bixiyay u adeegidda Xaddiiska Nebiga c.s.w. taasoo laga dheehan karo kutubtiisa ka badan boqolka.
Sheekh Albaani wuxuu dhintey maalin sabti ah bishuna ahayd Jumaadil-aakhira 22kii sanadkii 1420 H oo ku beegnayd labadii bishii tobnaad sanadkii 1999 M, waxaana la aasay salaadda cishaha ka dib Eebbe ha u naxariistee.
Qofkii xiisaynaya ama doonaya macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan Sheekha wuxuu u noqon karaa kutubta laga helayo Internetka ayna ka mid yihiin:
مع شيخنا ناصر السنة والدين (محمد ناصر الدين الألباني) مجدد القرن
Waxaana labadaas kitaab ee ka hadlaya taariikh nololeedkii Sheekh Albaani qoray laba Sheekh oo ka mid ah ardaydiisii Urdun.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheekh_Maxamed_Naasiruddiin_Al-Albaani&oldid=221693"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:43.